Guri ka Saarida | LawHelp Minnesota
Evictions (PDF)462.66 KB
Amarkii Hakinta guri ka saaritaanka ee Minnesota waa uu dhamaaday waqtigiisii. Hadii kiro lagugu leeyahay waxa aad ka heli kartaa caawin shabakada www.RentHelpMN.org. Ka akhri warqadayda xogta aruursan ee COVID-19: Xaquuqda Kireystaha iyo Dhamaadka Amarka Guri ka Saaritaanka wixii kale ee akhbaar ah.
Hadii aad khatar u tahay in guri lagaa saaro, waa inaad markiiba caawimaad heshaa. Hadii qolada gurigu ay jaa kaa xareysatay dacwo guri ka saarid ah, maxkamada ayaa kuu soo diri warqadaha dacwada. Warqadaha maxkamada ee guri ka saarida waxaa la yiraa Maxkamad uga yeerid iyo Ashtako. Hadii aad hesho Warqadaha Ashtakada iyo Maxkamad uga yeerida ee guri ka saarida, waxaa jira waxyaabo aad u baahan tahay inaad ogaato:
If you get a Summons and Complaint
1. Hel talo dhanka sharciga ah markiiba.
Hadii aad danyar tahay, wac xafiiska gargaarka sharciyada (legal aid). Waxa aad ka heli kartaa khayraadyo badan, xafiisyada gargaarka sharciga (legal aid) iyo caawimaado kale khadka (online) ka ee: www.LawHelpMN.org. Uma baahnid qareen si aad uga dagaalanto guri ka saarid, laakiin waa ay ku caawin kartaa inaad ogaato sharciga iyo xaquuqdaada.
2. Waqtigii laguu qabtay tag dacwada dhagaysigeeda
Ha soo daahin ama dacwada la’aantaa ayaa la xukumi. Tag dhagaysiga dacwada xataa hadii aadan haysan wax aad isku difaacdo si kolkaa aad maxkamada uga codsato in lagu siiyo ilaa iyo 7-cisho oo aad ku guurto.
Tag dhagaysiga dacwada xataa hadii ay qolada gurigu ku tiraa uma baahnid inaad tagto!
3. Buuxi Foomka Jawaabta
Buuxi Foomka Jawaabta. Waxa aad ka heli kartaa maxkamada ama khadka (online) ka. Si aad u hesho foomka Jawaabta Answer form gal www.mncourts.gov.
Riix “Hel Foomamka” “Get Forms”
Riix “Guryaha/Qolada Guryaha” “Housing / Landlord-Tenant”
Riix “Jawaabta Saarida” “Eviction Answer” (isticmaal foomka Gobolka oo dhan ah ama foomka Degmada Hennepin)
La imow 3 nuqul (copies) oo ah Jawaabtaada Maxkamada. Sii 1 nuqul qolada guriga, 1 na xaakimka, 1 na adigu haysto.
4. Hadii lacag lagugu leeyahay
Hadii lacag lagugu leeyahay, waa khasab inaad keento dhamaan lacagta oo dhan maxkamada, iyo waliba wixii khidmad ee ah la soo daahid lacagta ee lagugu leeyahay, khidmada dacwo xareysiga ee qolada guriga iyo khidmada adeega. Khidmada dacwo xareysigu waxa ay u dhaxeysaa $280 ilaa $300 iyadoo hadba ku xiran degmada. Khidmada adeegu waxa ay u dhaxeysaa $30 ilaa iyo wax aad uga badan – laakiin, waa inay noqotaa wax macquul ah. Waxaa dhici karta maxkamadu inay ku siiso ilaa iyo 7-cisho dacwada dhagaysigeeda ka dib si aad u bixiso khidmadaha, laakiin waa inaad codsataa. Waxaa kale oo lagaa rabi karaa inaad haysato dhamaan lacagta kirada ah oo dhan.
5. Hadii aad kirada u haysato sabab ah dhibaatooyin hagaajin la’aan ah awgood
Hadii aad kirada u haysato sabab ah dhibaatooyin hagaajin la’aan ah awgood, waa khasab inaad dhamaan lacagta kirada ah aad maxkamada keento. Karaaniga maxkamada ayaa haynaya lacagta inta uu xaakimku ka gaarayo go’aankiisa. Hadii aad u dhiibto lacagta kirada ah karaaniga maxkamada, waa inay lacagtu noqotaa cadaan ama jeega sugan (certified check) kuna qoran magaca “District Court Administrator. ” Uma baahnid inaad bixiso khidmada dacwo xareysiga ama khidmada la soo daahida. Waydiiso maxkamada inay amarto guri hagaajinta ayna kuugu soo celiso qaar ka mid ah lacagta kirada sababta ah inaad waqti ku noolayd guriga oo ay dhibaatooyin ka jiraan.
6. Isku day in heshiis lagu dhameeyo arrinta
Eeg inaad ka wada shaqeyn kartaan waanwaan adiga iyo qolada gurigu. Hadii lacag kiro ah lagugu leeyahay, isku day inaad tartiib-tartiib u bixiso. Hadii aad heshiis gaartaan, ha noqdo mid qoraal ah. Hubina in adiga iyo qoladu gurigu aad saxiixdaan. Maxkamadana keen heshiiska maalinta dacwada la dhagaysanayo. Waydiiso maxkamadu inay ansaxiso. Ha u goyn maxkamada, xataa hadii aad arrinta waanwaan ku dhamaysaan. Qolada gurigu maxkamada waa ay tagi kartaa, hadii aadan joogin adiguna xaakimku waxaa dhici karta inuu amro guri ka saarid.
7. Hadii maxkamadu ay amarto dhexdhexaadin, diyaar u ahow iyana
Maxkamadaha qaarkood, waxaa jooga dhexdhexaadiyeyaal isku daya inay adiga iyo qolada guriga ka caawiyaan inaad kiiska heshiis ku dhamaysaan. Hadii aad heshiis gaartaan, waxa uu noqon doonaa mid qoran si adiga iyo qolada guriguba aad u saxiixdaan. Heshiisku waxa uu qayb ka noqon doonaa amarka xaakimka waana mid ku qaban kara adiga. Ka fakar wixii aad jeclaan lahayd inuu kiiskaagu ku dhamaado ka hor inta aadan maxkamad tagin si kolkaa aad diyaar u ahaaho lacala hadii dhexdhexaadin la aado. Ha ogolaan sameynta wax aadan samayn karin ama aadan sameyn doonin. Heshiiska kama noqon kartid maxkamada ka dib. Hadii aadan u hogaansamin heshiiska la wada gaaray, guriga waa lagaa saari karaa.
8. Guri ka saaridu badanaa waxa ay kuu gali diiwaankaaga
Kiisaska guri ka saarida ahi kaa kuwa cid walbaa arki karto. Shirkadaha soo baarida kireystayaasha waxa ay soo sheegi karaan wixii guri ka saaritaan hore ah ilaa iyo 7-sanno ama ka badan. Hadii lagaaga guulaysto dacwo guri ka saarid ah aad ayey u adag tahay in la tirtiro (masaxid). Wixii kale ee akhbaar ah ee ku saabsan tirtirida ka eeg warqadayada xogta aruursan ee Tirtirida Kiisaska Guri ka Saarida Tirtirada Guriga Ka Saarida.
9. Hadii qolada gurigu aysan haysan sabab fiican oo ay u xareysatay dacwada guri ka saarida ah, waydiiso maxkamada in ay ka tirtirto kiiska diiwaankaaga
Tirtirida macnaheedu waa ka masaxida diiwaaanada dadweynaha kiiska. Si aad u hesho kiis tirtirid, maxkamadu waa khasab inay xukunto in:
Kiiska qolada gurigu “ uusan si ku filan sal iyo baar ugu lahayn xaqaaiqa ama sharciga,”
Tirtiradu waa “ay cadahay inay tahay maslaxada cadaaladda,” iyo in
“maslaxada cadaaladdu” aysan ka cuslayn “maslaxada guud ee ah ogaanta diiwaanka.”
Maxkamadu waxa ay tirtiri kartaa guri ka saaridaada kaliya hadii xaakim uu is yiraa qolada gurigu waa ay ku khaldanayd inay xareysato dacwada, ayna xaq-darro tahay in looga tago diiwaankaaga. Tusaaleyaal arrintaa ahi waxa ay noqon karaan:
warqadaha maxkamada si sax ah laguuguma keenin
qolada gurigu waxa ay tiri ma aad bixin kiro, laakiin waxa aad cadeysay inaad bixisay
qolada guriga inay kugu colaadinayso (aar goosanayso) ashtako ku saabsan hagaajimo
qolada gurigu waxa ay tiri waxa aad jabisay liiska, laakiin aad cadeysay inaadan jabin
Inaad ahayd kireyste ku jira guri bangi la wareegay, laakiin aadan helin waqti ogaysiin ah oo quman oo aad ku guurto. Eeg warqadayada xogta aruursan ee, Kolka qolada guriga aad uga jirto lagala wareego sarta, Kolka Qolada Guriga Aad uga Jirto lagala Wareego Guriga.
Difaacyada Badanaa loo Isticmaalo Guriga ka Saaritaanada
U sheeg xaakimka waxa aad isku difaacayso adigoo ka jawaabaya ashtakada qolada guriga. Difaaca waa sababo kiiska loo tuuri karo. Taa waxa aad sameyn adigoo xareysanaya Foomka Jawaabta. Calaamad sax ah saar sababaha ay u quseeyso xaaladaada. Qaar ka mid ah difaacyada badanaa la isticmaalo ee ku qoran foomka Jawaabta ayaa hoos lagu xusay.
Helida warqadaha maxkamada (geynta)
Sharciga Minnesota waxa uu dhigayaa in qolada gurigu ay khasab tahay inay kuugu keenaan warqadaha maxkamada qaab cayiman. Hadii qolada gurigu aysan kuugu keenin warqadaha maxkamada adiga qaabka saxda ah, waxa aad ka codsan kartaa maxkamada in kiiska la tuuro lana tirtiro (la saaro si aan dadku u arag).
Qolada gurigu waa khasab inay maxkamada ka xareystaan warqad oranaysa sida ay kuugu keeneen warqada maxkamada. Warqadan waxaa la yiraa adeega dhaarta (affidavit). Hadii aadan ka helin nuqul (copy) warqada adeega dhaarta (affidavit), waa inaad waydiisaa karaaniga maxkamada inuu ku tuso.
Qolada gurigu waa inay raacaan talaabooyinka si ay kuu siiyaan dukumiintiyada maxkamada: Marka ugu horeeysa, waxa ay isku dayaan inay waqadaha maxkamada gacanta kaaga kenaan. Waa inay isku dayaan ugu yaraan 2 goor oo kala duwan. Hal mid oo isku dayida ahi waa inay u dhaxeeysaa waqtida 6 FIIDNIMO ilaa 10 FIIDNIMO. Dhib ma leh hadii qolada gurigu ay u dhiibo warqadaha qof kale oo gurigaa ku nool, laakiin qofkaasi waa inuu noqdaa qof jira da’ uu ku fahmi karo warqadaha. Hadii warqadahan qaabkan laguugu keenay, “Adeegii” waa la sameeyey.
Laakiin hadii qolada gurigu ay ku heli waydo, ama aysan kuu keeni karin warqadaha, waa inay maraan talaabooyin kale oo dheeraad ah. Qolada guriga waa inay maraan talaabooyinkaa oo dhan:
Qolada gurigu waa inay maxkamada ka xareysaa waxa la yiraa “dhaarta la waayaha.”
Qolada gurigu waa inay boostada kuu soo dhigtaa warqadaha maxkamada adiga iyagoo kuugu soo hagaajinaya ciwaanka lagaa hayo.
Kolka ay boostada kuu soo dhigaan ka dib, waa inay maxkamada ka xareeyaan “dhaarta Boosto u dhigida” ee oronaysa in ay warqadaha maxkamada kuu soo direen.
Kolkaa qolada guigu waa inay tagtaa ciwaankaaga ayna ku dhajiyaan warqadaha maxkamada albaabka.
Qolada guriga kolkaa ka dib waa inay xareysato “dhaarta ku dhajinta” maxkamada.
Waa khasab inaad hesho warqadaha maxkamada ugu yaraan 7-cisho ka hor maxkamada.
Hadii qolada guriga aad ugu jirtaa aysan u hogaansamin mid ka mid ah xeerarkaa adeega, waxa aad maxkamada ka codsan kartaa in kiiska la tuuro lana tirtiro.
Kirada iyo Khidmaaha (Bixin La’aanta Kirada)
Waxaa dhici karta inaadan ogolayn kirada lagugu leeyahay inta ay tahay. Waa khasab inaad cadeyso cadadka lagugu leeyahay. Hadii aad haysato wax rasiidyo ah, la imow maxkamada.
Hadii ay jiraan dhibaatooyin hagaajin la’aan ah. Waydii maxkamadu inay kaa yareyso kirada. La imow cadeyn dhibka ah, warbixinada fatashayaasha, sawiro, makhraatiyaal. La imow cadeymo sheegaya in qolada gurigu ay ogayd dhibaatada. Xasuusnow, xaakimyada intooda badani ma ay dhagaystaan difaacan hadii aadan la imaan maxkamada dhamaan lacagta kirada ah ee lagugu leeyahay.
Waxaa dhici karta inaadan ogolayn khidmadaha qolada gurigu kugu soo dalacayso. Fiiri liiskaaga si aad eegto khidmadaha ku qoran. Khidmadaha ah lacagta badan ee la soo daahida kiradu sharci ma aha. Xataa hadii ay ku qoran yihiin liiska. Khidmada la soo daahida kirada waxaa lagu xadidaa 8% kirada aan la bixin.
Hadii qolada gurigu ay qaadato qayb kirada lagugu leeyahay ah, waxa ay ka tanaasuli karaan (faraha ka qaadi) xaqooda ay guriga kaaga saari kiro bixin la’aanta awgeed. Laakiin waxaa dhici karta in liiskaaga ay qoran tahay inaysan dhib ahayn in qolada gurigu ay qaadan karto qayb kirada ah ayna wali guriga kaa saari karto. Ka hubi liiskaaga arrintaa.
Marmarka qaarkood maxkamadu waxa ay ku siin waqti siyaado ah oo aad ku bixiso kirada ama khidmadaha. Waydiiso 7-cisho sharaxna sababta aad ugu baahan tahay waqtigaa.
Ogaysiiska Guurida (“Sii Joogida” Ka Dib Ogaysiiska Guri Banaynta ah)
Hadii aadan jabin liiskaaga, kiradana la bixiyo, qolada gurigu waa inay kuu soo dirtaa ogaysiis qoran oo quman oo guurid ah. Hadii ogaysiiska aan adiga lagugu siin qoraal ahaan muddada waqtiga quman ah, taasi waxay kuu noqon difaac.
Hadii aad haysato liis, waxa uu dhigi inta uu yahay waqtiga “ogaysiiska qumani.” Hubi ka dibna maxkamada la imow.
Xataa hadii aadan haysan liis qoraal ah, qolada guurigu waa inay ku siiso ogaysiis qoran oo ah ugu yaraan hal bil iyo hal maalin ka hor waqtiga guurida. Tusaale ahaan, hadii qolada gurigu ay rabto inaad adigu ka baxdo bisha Juun 30 keeda, waa khasab inaad hesho ogaysiis qoran ka hor Maajo 31 keeda. La imow ogaysiiskan maxkamada.
Qolo guri lahi kuma siin karto ogaysiis ka guurid ah hadii ay tahay aarsi sababtu. Taa macnaheedu waa isku dayga inay kugu colaadiyaan wax. Tusaale ahaan, hadii qolada gurigu ay kugu siiso ogaysiis ka guurid ah 90-cisho gudahood ka dib kolkii aad u wacday fatashaha amuuro la xiriira hagaajin, kolkaa waxaa laga soo qaadi in ogaysiisku u ahaa mid ka aarsi ah.
Hadii qolada gurigu ay aqbasho ama kaa codsato kiro ka dib waqtiga loogu talagalay inaad guuro waxaa dhici karta inay ka tanaasuleen xaquuqoodii ahayd inay guriga kaa saaraan sabab ah sii joogid.
Ku Xadgudubka Liisaska (Jabin Liis)
Hadii qolada gurigu tiraa waxa aad ku xadgudubtay liiska, waa inay cadeeyaan inaad leedihiin liiska qoran ama heshiis afka ah, iyo in ku xadgudubka liisku ay ahayd wax “weyn” (muhiim ah).
Hadii qolada gurigu ay ogyad ku xadgudubka liiska laakiin ay kiro kaa qaadeen adiga ka dib kolka ay taasi dhacday, waxaa dhici karta inay ka tanaasuleen (faraha ka qaadeen) xaquuqoodii ahayd inay guriga kaaga saaraan xadgudubkaa isaga ah.
A Qolo guri lahi kaagama saari karto guri hadii ay tahay aarsi sababtu, xataa hadii aad jabiso liiska. Taa macnaheedu waa inay kugu colaadinayaan wax adiga. Tusaale ahaan, hadii qolada gurigu ay xareysato dacwo guri ka saarid ah ka dib kolkii aad u wacday fatashaha amuuro la xiriira hagaajin, waxa aad ku mudici kartaa guri ka saaridu inay aarsi tahay.
Hadii qof aadan adigu u talin uu kalifay xadgudubka, sharax sababta aadan mas’uulka uga ahayn waxa dahcay. Laakiin xasuusnow, badanaa adiga ayaa mas’uul ka ah waxa ay ilmahaagu ama martidaadu ay sameyso.
Hadii aad naafo tahay ayna taasi qayb aka ahayd sababta ku xadgudubka liiska, sharax sababta ay naafanimadaadu ugu taxa-luqdo xadgudubka. Waydii xaakimka inuu amro qolada guriga inay sameeyaan “u maciino macquul ah” naafanimadaada ka dibna kiiska la tuuro.
Hadii ku xadgudubka liisku ay ku timi sabab ah dagaal qoyska dhexdiisa ah, dabagalid, dagaal labo qof oo is-shukaansanaysa dhex mara ama xoogid galmo waxaa dhici karta inaan guriga lagaa saarid.
Hadii aad ku nooshahay guryaha kiradooda la kabo, wac xafiiska adeegyada dhanka sharciyada ee deegaankaaga markiiba! Ka eeg warqada xogta aruursan ee ku saabsan Xaquuqda Guryaha kiradooda la kabo ee dhibanayaasha Dagaalka Qoyska dhexdiisa ah, ama Faraxumeynta Dambiga ah: Xaquuqda Guryaha Kiradooda la Kabo ee Dhibanayaasha Dagaalka Qoyska Dhexdiisa ah dhibku ka soo gaaro iyo galmada Xoogid ah.
Hadii aadan ku noolayn guryaha kiradooda la kabo, qolada guriga aad uga jirtaa sharciyan kaagama saari karaan guriga hadii xadgudubka sababtiisu tahay tacadi. Laakiin Ashtakada qolada gurigu sidoo kale ay qorto xadgudubyo aan u dhicin sababo la xiriira dagaal qoyska dhexdiisa ah, ama kufsi, dacwadaasi waa ay sii socon, laakiin kaliya uun xadgudubyada kale ee liiska. Ka eeg warqada xogta aruursan ee ku saabsan Dagaalka Qoyska dhexdiisa ah, Khashkhashaadaha, Dabagalida, ama Faraxumeynta Dambiga ah: Xaquuqdaada ka Bixida Liiska, Dhibanayaasha Dagaal Qoyska Dhex Mara, Qashqashaadda, ama Fal Dambiyeedka La Xiriira Galmoodka​​​​​​​
Hadii Maxkamada lagaaga Gar helo
Hadii aad u malaynayso in maxkamadu ay khalad sameysay
Hadii aad u malaynayso in maxkamadu ay khalad sameysay, waxa aad haysataa 15-cisho oo aad ku xareysato racfaan. Hadii garsoore uu go’aanka gaaray, waxaad sidoo kale xaq u leedahay in go’aanka uu dib u eego xaakim, laakiin waa inaad degdeg talaabo u qaado. Waydiiso karaaniga maxkamada foomamka. Hel talo dhanka sharciga ah markiiba.
Waa aad waydiisan kartaa maxkamada ilaa iyo7-cisho oo aad ku guurto inay ku siiso
Waa aad waydiisan kartaa maxkamada ilaa iyo7-cisho oo aad ku guurto inay ku siiso. U sheeg maxkamaad sababta aad ugu baahan tahay 7-cisho. U sheeg hadii ilmo, waayeel ama dad naafo ahi ay guriga kugula nool yihiin adiga. Waa khasab inaad waydiisato waqtigaa si aad u hesho.
Qolada gurigu ay hesho Amar (Writ) maxkamadeed
Qolada gurigu ay hesho Amar (Writ) maxkamadeed. Qoladu guriga waa inay shariifka ama bilayska waydiisataa in amarkaa ay adiga kuu geeyaan ama ay ku dhajiyaan albaabkaaga. Amarku (Writ) waxa uu adiga ku siin 24-saac oo aad ku guurto. Hadii aadan guurin, qolada gurigu waxa ay ka qaban waqti iyo maalin aad guuri shariifka. Shariifku waa inuu meesha joogaa si uu u kormeero in alaabtii la xirxiray ayna dhigeen meel guriga dibada ka ah qolada gurigu. Albaabtaada waa la dhigi karaa meel kale oo qolyaha guryahu ay leeyihiin ama waxaa la geyn karaa meel ka baxsan guriga.
Eeg warqadayada xogta aruursan ee Dib U Helitaanka Hantidaada Ka Dib Marka Aad Guurto.